Izidakamizwa Ezintsha Zesifo Sikashukela > Imithi
Izidakamizwa zesizukulwane esisha zohlobo 2 sikashukela: uhlu lwezidakamizwa, imiyalo, izibuyekezo
Imithi Yesizukulwane Esilandelayo isiza Ukulahlekelwa Isisindo bese Yehlisa Ubungozi Bentliziyo Yakho
Unyaka ka-2016, osondela esiphethweni salo esinengqondo, waletha izinto eziningi ezithokozisayo. Ngaphandle nje kokuthi ukutholwa kwemithi okujabulisayo okunikeza ithemba ezigulini ezinezifo ezingamahlalakhona ezingalapheki, ikakhulukazi, isifo sikashukela.
Luvela kanjani isifo sikashukela esinga-insulin-2
Lesi yisifo esiyinkimbinkimbi se-endocrine, yize sinaso, umuntu akaxhomekekile nge-insulin, ngoba i-pancreas ikhiqiza i-insulin engasebenzi. Lolu hlobo lwesifo sikashukela lukhula futhi luqhubeke kancane kancane, cishe ngaphandle kokuzidalula. Enye yezizathu zokuqala ukukhombisa ifa, kepha ngomqobelo omncane: hhayi lesi sifo uqobo sidluliselwa, kepha ubungozi be-pancreas ezimweni ezicasulayo. Isizathu sesibili esingesikho ukuthi ukukhuluphala, kuhambisana nendlela yokuphila yokuphila. Okwesithathu ukukhulelwa. Ukuhlolwa ngudokotela we-endocrinologist kubaluleke kakhulu, ikakhulukazi esikhathini sangemva kokubeletha.
Abantu ngemuva kwama-40 badinga ukulalela ngokucophelela imizwa yabo. Futhi uma ubuthakathaka, ukukhathala nokukhathala kubhekwa kaninginingi, isifiso sokudla siyakhuphuka, kepha isisindo somzimba asikhuphuki, kepha okuphambene nalokho, ukoma ukhuphuka (ngesinye isikhathi kuze kufike kumalitha ama-5 amanzi adakiwe ngosuku), amanxeba aphola kancane, ukuqina kwamehlo, kwesinye isikhathi ukukhubazeka kwamalunga, ukubonakala kwamathumba, konke lokhu kuhlangene, kuyisizathu esibi sokukhathazeka nokuvakashela udokotela. Uma ucabanga ngamaphesenti aphezulu abantu abasendaweni ehlala ubungozi, akunangqondo ukungalunaki usizo futhi uyixoshe inkinga.
Yimiphi imisebenzi okufanele yenziwe ekwelashweni kwemithi yesifo sikashukela enganciki i-insulin
Kufanele ngokushesha enze ukubhuka: alikho ikhambi elingcono lesifo sikashukela sohlobo 2. Uchwepheshe oqeqeshiwe unikeza ngemithi ngokususelwa ezicini ezithile zesiguli: iminyaka, isisindo kanye ne-contraindication engenzeka engaletha izifo ezihambisanayo. Ngakho-ke, imishanguzo, izinhlobo zokwelashwa zikhethwa kuphela ngudokotela oholayo futhi ngawodwana. Izidakamizwa zesizukulwane esisha zohlobo 2 sikashukela zenzelwe ukukhulisa i-pancreatic insulin, zenze isibindi sehlise isilinganiso sokukhiqizwa ushukela, ama-cell receptors kufanele athuthukise ukuzwela kwe-insulin, anciphise ukungena kweglucose.
Kunezimo lapho labo abaphuza umuthi behlisa isisindo esikhulu - khona-ke kungaba khona izinketho lapho kunqunywa ukwelashwa kwe-insulin. Futhi akukufanele ukuchaza iqiniso lokuthi ngisho nekhambi eliphumelelayo lesifo sikashukela sohlobo 2 ngeke lisize, futhi ngeke lisize isiguli esinesifo sikashukela esincike ku-insulin. Ngakho-ke, akukho ukuzelapha nokuzilungiselela. Kungemva kokubonisana nodokotela obheka isiguli ngqo, kungenzeka ukuqala ukwelashwa ngemithi.
Ukuzijwayeza kukhombisa ukuthi lo muthi unconywa futhi ubekwa odokotela kalula, ngoba enye yezimo zokubala ukugula ukwenza i-glucose ibe ngokwejwayelekile. Ukujwayela okokuqala ngesidakamizwa "Diabeteson" nemiyalo yokusetshenziswa kuyadingeka.
Umuthi osebenzayo yi-gliclazide - okukhishwe ku-sulfanylurea. Isidakamizwa uqobo sinelungelo lobunikazi futhi senziwa emabhizinisini emithi e-France. Kepha kusukela ngo-2005, ifomula evuselelwe futhi eyenziwe ngcono yomkhiqizo isingene emakethe, ngakho-ke ukulethwa kwesampula eliphelelwe isikhathi sekuyekiwe. Kuvele uhlobo olusha lwemithi ethengiswa - "Diabeteson MV".
Isixazululo esisha esizukulwaneni esisha somuthi singabizwa ngokuthi ukukhululwa okuguquliwe, okuyisisekelo esiphelele sokuxhumana kwesidakamizwa namaseli omzimba wesiguli, ngenxa yokuthi i-"Diabeteson MV" ngokulinganayo iqala ukuthinta umzimba futhi asikho isidingo sokuboshwa ohlelweni lwezinqubo zokulawulwa kwezidakamizwa. Ithebhulethi elilodwa lanele usuku. Futhi umphumela emzimbeni uthambile, nakho kubalulekile. Ngokwenza okuthile kumanyikwe, kuthuthukisa ukukhiqizwa kwe-insulin.
Imiphumela enenzuzo ifaka okulandelayo: kunciphisa kakhulu ingozi yokuqhekeka kwegazi emithanjeni. Isigaba sokuqala sokukhiqizwa kwe-insulin siyabuyiselwa. Futhi amaphilisi ngokwawo angama-antioxidants amahle (abavikeli bamaseli emiphumeleni yobuthi). Kwesinye isikhathi lesi sidakamizwa sithathwa ngabasubathi ukuze sikhuphule isisindo somzimba. Isizukulwane esisha sesifo sikashukela mellitus uhlobo 2 sikashukela "Diabeteson MV" sivame ukunqunywa ochwepheshe abaqeqeshiwe, uma phakathi nesikhathi sokwelashwa, ngesikhathi sokubhekwa kwesiguli, inqubekela phambili ayizange ibonwe, ngokuya ngokudla okujwayelekile nokunempilo nokulinganisela kanye nokuzivocavoca komzimba okusebenzayo.
Ezimweni lapho, ngenxa yezizathu ezinengqondo, ukusetshenziswa komuthi isikhathi eside kudingeka, khona-ke ukuphathwa kweminye imishanguzo kukhanseliwe (uma izici nemiphumela kufana). Futhi isiguli kuzodingeka silinde cishe izinsuku ezintathu. Umthamo uqala ngo-80 mg kanye ngosuku, khona-ke ngokubona kukadokotela ozayo kungakhuphuka.
Ubani okungafanele asisebenzise lesi sidakamizwa
Njengayo yonke imishanguzo, lena inemiphumela yayo emibi ekhethekile, ngakho-ke, ngaphambi kokuqala isifundo sokwelapha, kubalulekile ukuba uzijwayeze ngemithi yesifo sikashukela nemiyalo yokuyisebenzisa.
abantu abanesifo sikashukela esincike ku-insulin
lezo ezinokwehluleka kwezinso nezinso
ukuthatha i-mecanazole, phenylbutazone (butadine), danazole,
ngesilinganiso esinamandla kakhulu sokubola komzimba, i-ketoaciadosis,
uma kukhona ukungabekezelelani kwe-lactose,
nokusabela okukhona okungalungile ku-gliclazide.
Kungenzeka ube nale miphumela emibi:
Isiguli sinesifiso esandayo sokudla, ikhanda.
Kwesinye isikhathi, phakathi nokwelashwa, i-nausea kanye nokuhlanza kungenzeka.
Ukucasulwa nokungaphatheki kahle kuyanda, kwesinye isikhathi ukucindezeleka kwenzeka.
Ukukhathala kukhuphuka njalo ngezikhathi ezithile zobuthakathaka.
Ukunakekelwa kufanele kuthathwe, njengoba i-syncope ingenzeka.
Ama-visual acuity angalahleka, ukugxilisa ingqondo nokunaka kungaphazamiseka.
Ukwehla komzimba kanye ne-anemia kwesinye isikhathi kuyabonakala.
Lona omunye umuthi omusha wesizukulwane 2 wesifo sikashukela ovuselela i-insulin. Futhi ngesikhathi sokukhula kwayo, sanaka kakhulu ubungozi obuhambisana nokuthuthukiswa kwezifo zenhliziyo okungavela lapho kuthathwa izidakamizwa ze-hypoglycemic. Izibhebhe ze-Liraglutide zithathwa ngqo ngokuya ngomuthi, futhi uma inkambo yokuthatha amalungiselelo e-sulfanylurea ithathwa ngasikhathi sinye, udokotela ohambelayo anciphisa umthamo wale mishanguzo, kuze kube yilapho inkambo ikhanseliwe ngokuphelele.
Umthamo wokuqala ngu-0.6 mg, emva kwalokho ukhuphukela ku-1,2 mg futhi lokhu, nakanye ngosuku. Kungase kuqhamuke isimo sokuthi isiguli sikhohlwe ukuphuza umuthi ngesikhathi futhi sizama ukuqonda okufanele sikwenze ngokulandelayo. Uma kwenzeka isimo esinjalo, kunconywa ukulinda kuze kuthathwe umuthi olandelayo.
I-contraindication yokuqala yi-hypersensitivity. Awukwazi ukusebenzisa umuthi ngefomu lesifo sikashukela esincike ku-insulin. Kuyenqatshelwa ukusebenzisa abantu abane-pathologies yezinso nesibindi, i-pathologies yamathumbu nezingane ezingaphansi kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili.
Phakathi kwemiphumela emibi, ukungasebenzi kahle kwezinso kuvame kakhulu, i-urticaria, ukuqubuka, ukuhanjiswa kungavela. Isicanucanu nokuhlanza kuvela ikakhulukazi ekuqaleni kwekhosi, kepha lapho inqubo (ngemuva kwamasonto amabili) ukuphoxeka kunyamalala, ukukhula kwesikhumba kungenzeka, kepha amacala anqabile kakhulu.
Lesi sidakamizwa sinqunyelwe abantu abadala abanesifo sikashukela bazo zonke izinhlobo. Ngaphansi kwethonya lazo, hhayi kuphela ukufakwa kwe-glucose ngamathumbu kuyancipha, kodwa i-glucogeneis esibindini nayo ivinjelwe kakhulu, kanti ne-glucose iyasetshenziswa. Isisindo somzimba siyazinza noma siyancipha. Ungayithatha kanjani iMetformin yesifo sikashukela? Umthamo usethwe uqobo futhi uchwepheshe kuphela. Imvamisa, isigaba sokuqala senkambo yokwelashwa siqukethe amaphilisi amabili ngosuku. Ngemuva kwamasonto amabili, umthamo ungashintsha, kucatshangelwa okuqukethwe ushukela wegazi. Okuphezulu okuvunyelwe ngamaphilisi ayi-6 ngosuku. Kubantu asebekhulile, okunconyelwayo okuhlinzekwayo ngamathebhulethi ama-2. Umuthi uphuzwa ndawonye noma ngemuva kokudla.
Kukhona umehluko omncane owodwa: ukuze kungabikho zinkinga ngokugaya, umthamo onconyiwe kufanele uhlukaniswe imithamo eminingana. Lapho ugeza umuthi ngamanzi, kufanele kudliwe inani elincane laleli ketshezi.
Izici zokuvimbela nokuxwayisa lapho uthatha iMetformin
Kwenqatshelwe ukusebenzisa lesi sidakamizwa ukuze: i-pathology yomsebenzi wezinso, isilinganiso esibi kakhulu sokuwohloka kwalesi sifo, i-ketoaciadosis, ukusebenza kwenhliziyo okulimazayo, umkhuhlane kanye nokutheleleka okuthe xaxa, kukhulunywe ngokusetshenziswa kophuzo oludakayo, kanye nasekwelashweni kwezidakamizwa eziqukethe iodine (i-radiopaque).
Uma sichaza imiphumela emibi, into yokuqala okufanele uyiqaphele kakhulu kungukuphulwa kohlelo lokugaya ukudla. Izinkinga ezinjengokuhudula, isicanucanu, ukugabha, ukwehlisa izinga lokushisa lomzimba, izinhlungu ezibukhali esiswini nasemisipha kungenzeka. Ngemuva kwesikhashana esithile, uma ukuphefumula ngokushesha nesiyezi kubonwa, umuntu angahle aqashele futhi awele ngokweqile. Lezi yizimpawu ze-lactic acidosis futhi zenzeka nge-overdose. Awukwazi ukuhlola umthamo wemithi yezizukulwane ezintsha yesifo sikashukela sohlobo 2 futhi futhi ukwandise kakhulu - lokhu kungaholela ekufeni.
Amathuba nezici ze-Exenatide
Umuthi "i-Exenatide" umiselwe iziguli ezinesifo sikashukela esingaxhomekeki ku-insulin ngokudla okujwayelekile nokunempilo nokuzivocavoca ukuze kuqashwe ngempumelelo ushukela wegazi uma kukhulunywa nge-monotherapy. Odokotela bangawunikeza lo muthi ngokuhambisana neminye imishanguzo, njengeMetformin, i-Thiazolindione. Umuthi uphathwa ngokungaziphathi. Emkhakheni wokuqala wokwelashwa, ama-5 mcg kabili ngosuku imizuzu engamashumi amahlanu kuya kwamashumi ayisithupha ngaphambi kokudla. Ngemuva kokudla, umuthi awukwazi ukusetshenziswa.
Ungakwenza, kodwa ngokuqapha
Kwesinye isikhathi uma uthatha lo muthi, ukungaphatheki kahle kungavela esiswini ngokushintshwa kobuhlungu obukhulu. Uma zihambisana nokuhlanza, kufanele uthintane nochwepheshe ngokushesha, ngoba izimpawu zibonisa ukuqala kwe-pancreatitis. Kwaqoshwa izikhalazo ezingejwayelekile ngemiphumela emibi yesidakamizwa emsebenzini wezinso. Ukusabela kokungezwani komzimba nokwesikhumba kuye kwabonwa (isb., Angioedema). Uma sikhuluma ngomphumela womzimba ngesikhathi sokuhlukunyezwa, ozovezwa ngokwanda okuphindwe kayishumi kumthamo ojwayelekile, khona-ke ukuphazamiseka kokugaya ukudla kanye ne-hypoglycemia kungaba yizici ezingezinhle.
Yini okufanele ucabangele lapho usebenzisa umuthi
Awukwazi ukufaka i-Exenatide ngemuva kokudla. Umuthi uhloselwe ukuphatha okungaqondakali kuphela, ezinye izindlela azamukeleki. Kungadala ukuqunjelwa. Enye yezimpawu ukwehla kwesisindo kanye nokulahlekelwa isifiso sokudla, kepha akunqweneleki ukunciphisa umthamo, yize kubalulekile ukwazisa udokotela obekhona ngalokhu.
Imithi emisha 2 yesifo sikashukela ingaqukatha i-sitagliptin. Ngemuva kokudla, ama-hormone omndeni we-incritin, ahlanganiswe emathunjini, aba nomthelela ekwandeni ekwakhekeni kwe-insulin. I-Sitagliptin ithinta ukwanda kwezinga le-incritin, kunciphisa ukukhishwa kwe-glucogon, okwandisa ukugcwala kwe-insulin ethembele ku-glucose.
Ukubuyekezwa mayelana ne- “Januvia” okuhle kakhulu. Lezi zibhebhe zingasetshenziswa ku-monotherapy, ngaphezu kokudla okunempilo okunempilo kanye nemfundo yomzimba. Basiza ukulawula kangcono ushukela wakho wegazi kushukela 2 woshukela. IJanuvia ingahlanganiswa neminye imishanguzo, noma ihambisana neminye engathi sína njengeMetformin neTiazolidine.
Ithebhulethi zithathwa ngomlomo ngaphandle kokubhekelwa ekudleni kokudla. Uma isiguli sikhohliwe ukuphuza umuthi, khona-ke lokhu kufanele kwenziwe ngokushesha. Kufanele uqaphele: awukwazi ukuthatha umthamo ophindwe kabili weJanuvia.
Kukuziphi izimo lapho kufanele wenqabe ukusebenzisa umuthi
Kuyenqatshelwe ngokuphelele ukunquma futhi, ngenxa yalokho, uphuze lo muthi kubantu abanesifo sikashukela esincike ku-insulin. Kumele kuqashelwe ukuthi ukutadisha ngokucophelela konke okukhethwa kukho okulindelekile nokulindelekile kokuthonya umzimba kuzosiza ekugwemeni ukusetshenziswa kwalabo bantu abanokuphambuka kokusabela okungekuhle komzimba. Uma lesi sidakamizwa sithathwa ngesikhathi sokuqunjelwa, khona-ke ukondla kufanele kumiswe. Ezinganeni nasentsheni engaphansi kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala, ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa kuyaphulwa.
Imiphumela emibi engaba khona
Njengomuthi iningi, lesi sidakamizwa singadala umuzwa wokucindezelwa kwesifuba, ukwanda kwe-migraines. Ipheshana lesibindi kanye nesibindi lingaphendula ngokungahambisani nokusetshenziswa komuthi.
Ngawo wonke umcebo wokuzikhethela
Uhlobo luni lwamaphilisi kashukela amathathu asebenza kangcono? Ayikho imishanguzo ephelele engasiza kuphela zonke iziguli. Futhi yize uhlobo lwe-2 isifo sikashukela singancikileli kwi-insulin, akuvamile ukuba lusetshenziswe ekwelashweni kwezidakamizwa, ngokufanele bakholelwa ukuthi ukudla ngendlela enempilo nokukuvumela ukuthi ulawule ushukela wegazi ojwayelekile, kepha umzimba womuntu ngamunye unezimpawu zawo siqu.
Isizukulwane esisha semithi yesifo sikashukela sohlobo 2 sibhekwa njengokuthuthuka kakhulu nokuphephile. Izibonelo ezicacile zingamalungiselelo "Diabeteson" ne "Diabeteson MV". Owokuqala umuthi wokukhipha osheshayo, owesibili yithebhulethi ekhishwe modified (umthamo uyancishiswa, futhi isikhathi siyanda).
Kuyadingeka, utadishe ngokucophelela imiyalo, ukuze ungaphuthelwa amaphuzu abalulekile njengosuku lokuphelelwa yisikhathi nezindlela zokugcina imithi.
Inkambo yesifo incike kuphela esigulini nasezingeni lezinto ezishukumisayo. Ngakho-ke, izimfanelo eziphambili zesifo sikashukela kufanele kube ukucabanga, ukuqaphela, ukucabanga kanye nesibopho sempilo yomuntu.
Ngeshwa, izinqubo ezingenakuphikwa zenzeka emzimbeni weziguli ezinesifo sikashukela. Imvamisa (ngamaphesenti angama-90%), ama-pancreas awakwazi ukukhiqiza i-hormone insulin ngamanani anele noma umzimba awukwazi ukuyisebenzisa kahle, ngenxa yalokho kukhuphuka izinga likashukela egazini bese kukhuphuka uhlobo 2 sikashukela.
Ake ngikukhumbuze ukuthi i-insulin iyisikhiye esivula indlela ye-glucose evela ekudleni okuya egazini. Isifo sikashukela sohlobo 2 singenzeka nganoma yisiphi isikhathi, futhi kuvame ukwenziwa ngasese iminyaka eminingi. Ngokwezibalo, zonke iziguli zesibili azinalo ushintsho olukhulu olwenzeka emzimbeni wakhe, olwenza kube nzima ukwanda kwesifo.
Kakhulu kaningi, kubikwa isifo sikashukela sohlobo 1, lapho amaseli we-pancreatic ngokuvamile eyekela khona ukufaka i-insulin, bese isiguli sidinga ukuphathwa kwehomoni ejwayelekile ngaphandle.
Isifo sikashukela sobabili sohlobo 1 nohlobo 2, esishiywe inhlanhla, siyingozi kakhulu: njalo ngemizuzwana eyi-6 kuthatha impilo eyodwa. Futhi ukubulala, njengomthetho, akuyona i-hyperglycemia uqobo, okungukuthi, ukwanda koshukela wegazi, kodwa imiphumela yayo yesikhathi eside.
Ngakho-ke, isifo sikashukela asisibi kangako njengezifo “esiqala”. Sifaka ohlwini ejwayelekile.
Isifo senhliziyo, kufaka phakathi isifo senhliziyo esibuhlungu, umphumela wemvelo osho izinhlekelele - ukumelana ngokomqondo nokushaywa unhlangothi.
Isifo sezinso, noma iDiabetesic Nephropathy, okhula ngenxa yomonakalo ezitsheni zezinso. Indlela, ukulawula okuhle kwamazinga kashukela egazi kunciphisa kakhulu amathuba ale nkinga.
I-neuropathy yesifo sikashukela - ukulimala kohlelo lwezinzwa, okuholela ekugayweni kokukhubazeka, ukungasebenzi ngocansi, ukwehla noma ngisho nokulahlekelwa ukuzwela emilenzeni. Ngenxa yokuzwela okuncishisiwe, iziguli zingahle zingakuboni ukulimala okuncane, okugcwala ukukhula kwesifo esingelapheki futhi kungahle kube nomphumela wokunqunywa kwezitho nezingalo.
I-retinopathy yesifo sikashukela - ukulimala kwamehlo, okuholela ekunciphiseni kombono kuze kuqede ubumpumputhe.
Sinye salezi zifo singadala ukukhubazeka noma size sife, kanti nokho ama-pathologies ezinhliziyo athathwa njenganobuqili kakhulu. Ukuthola lokhu ukuthi ezimweni eziningi kubangela ukufa kwesifo sikashukela. Ukulawulwa kwe-hypertension ye-arterial, isifo senhliziyo esi-coronary, izinga le-cholesterol lisendingeni yesidingo sokuthola isinxephezelo esanele se-glycemia uqobo.
Ngisho nenkambo efanelekile yemicimbi - ukwelashwa okufanele, ukudla, njll. - ingozi yokufa ngenxa yokuhlaselwa yisifo senhliziyo noma isifo sohlangothi sikashukela sikhulu kakhulu kunabantu abangenayo i-hyperglycemia. Kodwa-ke, izidakamizwa ezintsha ze-hypoglycemic ezihloselwe ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 zingagcina zisiguqule i-veter ziqonde ngendlela efanelekile futhi zithuthukise kakhulu ukuqwashisa ngalesi sifo.
Imijovo esikhundleni samaphilisi
Imvamisa, izidakamizwa zokwelapha isifo sikashukela esingaxhomekeki ku-insulin zinikezwa njengamaphilisi omlomo. Lo mthetho ongashiwongo ungene ekuqashelweni ngokufika kwezidakamizwa ezijova ezikhuthaza ukuvikelwa kwe-insulin, njenge-liraglutide.
Impahla enhle ye-liraglutide, ehlukanisa phakathi kwezinye izidakamizwa eziningi ze-hypoglycemic, yikhono lokunciphisa isisindo somzimba - ikhwalithi eyivelakancane kakhulu yabenzeli be-hypoglycemic. Imithi yesifo sikashukela ivame ukufaka isandla ekuzuzeni isisindo, futhi lo mkhuba uyinkinga enkulu, ngoba ukukhuluphala yinto eyengeziwe yobungozi. Ucwaningo luye lwabonisa: ngesikhathi sokwelashwa nge-liraglutide, isisindo somzimba weziguli ezinesifo sikashukela sehle ngamaphesenti angaphezu kuka-9, okungahle kuthiwe ngohlobo lwamarekhodi emithi edambisa ushukela wegazi. Kodwa-ke, umphumela onenzuzo wesisindo awusiwona kuphela inzuzo ye-liraglutide.
Ucwaningo olwaqedwa ngo-2016 kanye neziguli ezingaphezu kuka-9,000 ezathatha i-liraglutide cishe iminyaka emi-4 lukhombisa ukuthi ukwelashwa ngalo muthi akusizi nje ngokwejwayelekile amazinga eglucose egazini, kepha futhi kunciphisa nengozi yesifo senhliziyo.
Ukunciphisa amathuba okuthola izinhlekelele ezimbi kakhulu zenhliziyo, ngaphansi kwenkemba yeDamocles okuhlala kuyo abanesifo sikashukela esiningi, cishe ngekota impumelelo enkulu engasindisa izinkulungwane zabantu. Imiphumela enjalo ehlaba umxhwele yomsebenzi wokucwaninga kososayensi ivumela ukubheka ngesibindi ezigidini zeziguli, kuqinise ukuzethemba kwabo: isifo sikashukela asisona isigwebo.